Ukuphila kuyinto ebuthakathaka futhi engabalulekile. Ngokushesha noma yikuphi, wonke umuntu uvela phambi kukaNkulunkulu, futhi akukho okungaqondakali futhi enganekwane kunokufa. Enkolweni yobuKristu, ngokufa kanye nemikhosi yomngcwabo, kunezibonakaliso eziningi nezinkolelo-ze. Imithetho yabo yokuhlukahluka kanye nokulandela umthetho kuxhomeke ezweni kanye nesifundazwe esithile. Ezimweni eziningi, zingashintsha kancane, kepha ukuvuma okuningi okuhambisana nemingcwabo kungenye yazo zonke amakholwa angamaKristu.
Izimpawu zabantu eziyinhloko zemingcwabo
Isiko lomkhosi womngcwabo ulawulwa ngokuqinile. Zonke izigaba zokungcwatshwa azihambisani nje kuphela nemikhuba yamasonto kanye nemigodi, kodwa futhi ngezibonakaliso ezimbalwa, ukugcinwa okuhloswe ukusiza ukuguquka komphefumulo womfowenu kwelinye izwe, nokuqinisekisa ukuthula nokuchuma kwabaphilayo. Izimpawu eziyinhloko, okhokho bethu abakholelwa futhi zilandelwa, zisekelwe ngokubheka isikhathi eside abantu kanye nokuhleleka okuphezulu kokusebenza kwazo ngokuphathelene namandla aqinile nesindayo sokufa. Kusukela esikhathini esidlule, okokuqala emngcwabeni:
Kuvikelwe abesifazane abakhulelwe. Ngesikhathi sokukhulelwa, abesifazane bayaphikisana nanoma yikuphi ukucindezeleka. Okuhlangenwe nakho kokungcwaba kanye nokuhlangenwe nakho okukhathazayo akuthinteki nje kuphela ingqondo yowesifazane okhulelwe, kodwa futhi i-aura namandla akhe omntwana ozayo. Ngakho-ke, ukuhlala kwabesifazane abakhulelwe endlini lapho oshonile khona kungathandeki. Kodwa uma ukufika emngcwabeni kungeke kugwenywe, khona-ke lona wesifazane ushiya indlu ngaphambi kokuba oshonile azalwe kuwo. Kukholelwa ukuthi umphefumulo womuntu oshonile ungathatha nomphefumulo wengane engakazalwa.
Babenakekela izingane. I-acrid yengane yomntwana nengabe isengozini akumele ithonywe amandla amakhulu okufa. Phakathi nqubo yonke yemikhosi yomngcwabo bathathwa ukuze banakekelwe kwenye indlu. Uma lesi simo singagcinwa, abantu abadala baqaphelisisa ukuthi ingane ayihlali yedwa nomuntu oshonile, ayikwazi ukuthatha noma ifake noma yini ebhokisini, ayizange iphule umkhuba ngomsindo futhi imemeza. Lokhu kanye nezinye izenzo ezingenalutho zomntwana ziyakwazi ukubangela izinkinga, ukugula noma ngisho nokufa kwezihlobo.
Ukuqaphela ukulila. Ukulila nokudabuka komuntu oshonile kunesikhathi esithile, esimiswe ngamasiko amaKhristu. Ngokwesiko, ukulila kuthatha unyaka owodwa. Phakathi nalesi sikhathi, izihlobo eziseduze zomuntu oshonile zigqoke izingubo ezimnyama, abesifazane bafaka amakhanda amnyama ngamakhanda amnyama, umndeni wonke awuhlanganyeli emikhosini enomsindo futhi awuhlezi imikhosi ngesikhathi sokushada nanoma yimaphi amaholide omndeni. Zijabulise, zihlelwe ngemuva nje kokushona komuntu othandekayo, zithembisa usizi, inqwaba yezinhlekelele noma ukufa ezihlotsheni zakhe.
Izimpawu ngesikhathi sokulungiselela nokuziphatha komkhosi wokungcwaba
Zonke izinqubo zokulungiselela umngcwabo nokungcwaba komzimba womuntu oshonile zihambisana nezimpawu eziphoqelekile:
Emva kokufa komuntu, izibuko kanye nazo zonke izibuko ezibukeka endlini ziboshelwe ngendwangu enombala. Izibuko zibhekwa ngokuthi "ugibe", okungekho kuphela umphefumulo womuntu oshonile ongabonakaliswa, kodwa futhi unamathela ngaphambi kokuya kwelinye izwe. Izibuko ezifakiwe kufanele zibe izinsuku ezingamashumi amane, noma ngisho nangaleso sikhathi lapho bekhumbula khona oshonile.
Amanzi emva kokugeza umfelwa kucatshangwa ukuthi unamandla amakhulu futhi uyisimo esinamandla sokuqondisa ukungcola. Ngakho-ke, ngemva kokugeza umzimba womuntu oshonile, amanzi athululelwa ezindaweni lapho abantu abangahambi khona, futhi isobho, inqwaba nezinye izinto ezisetshenziselwa ukugeza zifakwa ebhokisini.
Endlini lapho oshonile khona, amagatsha e-spruce noma amapineyini afakwa emnyango ukuze avikele abantu amandla okufa abazofika ukuchitha indlela yokugcina yomuntu oshonile. Izinaliti zinendawo yokugcina amandla angasebenzi, futhi abantu ngeke baphathe ukufa ekhaya labo.
Izihlalo, izihlalo noma amabhentshi okwakukhona kuwo umkhumbi, ngemuva kokuguqula oshonile endlini, baphenduka phansi. Bangabuyiselwa esimweni sabo esijwayelekile ngosuku. Ngakho umoya womuntu oshonile ngeke abe nendawo angabuyela kuyo. Ukuze "ukusika" amandla okufa kule ndawo kuzokusiza imbazo, okumele ilale khona usuku.
Izansi endlini yomuntu oshonile zihlanjululwa ngamanzi entwasahlobo ukuze umoya wokufa ususwe esakhiweni ngamandla amakhulu. Gcwalisa wonke amagumbi ngakwesokunxele kusukela ekhoneni elide kuya emnyango wangaphambili. Ukufa futhi akubuyeli endlini, uma umuntu ofileyo efafaza umgwaqo nge-rye.
Awukwazi ukuwela umgwaqo womngcwabo womngcwabo womunye umuntu, ohlangene endleleni. Kukholelwa ukuthi umuntu owenzile cishe uyagula futhi afe, noma ukuhlehlisa impilo ngenxa yezizathu ezithile. Kodwa-ke, uma lo mthetho ungaphuli, khona-ke ukuhlangabezana ngendlela yokulila kubhekwa njengesibonakaliso esihle futhi uthembisa inhlanhla.
Izihlobo zomuntu oshonile kufanele ziphosele ethuneni esihlalweni somkhumbi ngenxa yomhlaba omncane. Lo mkhuba uphula amandla aphilayo nokufa, futhi izihlobo zomuntu oshonile zithola ukuthula. Kukholelwa ukuthi lapho umhlaba usuka ezandleni zezihlobo nabangane uthinta ubuso bebhokisi, umphefumulo womuntu oshonile uzoba nomzimba kuze kube phakade.
Ngemuva komngcwabo, amahekhi ayenziwa ngazo izinyembezi aphonswa, ukuze angathwali usizi endlini. Emangcwabeni umhlaba ngezicathulo zisusiwe ngenxa yesizathu esifanayo. Lapho ebuya ekhaya, usizi, usizi nobuhlungu bokulahlekelwa ezandleni nasebusweni nakho kuhlanzwa.
Izimpawu zabantu nsuku zonke
Izimpawu zabantu mayelana nobusika
Izimpawu ezimpilweni zethu: "ngani?"
UMaria Kozhevnikova utshele ngobugqila empilweni yakhe
Yidla ngokususa ama-acne
I-strawberry ne-rhubarb dessert
Izingxubevange nokubuyisana embhedeni
Kuthiwani uma ingane ingafuni ukulala?
Yini ongayinika ingane encane yonyaka omusha?
Ama-Fritters avela kuma-courgettes
Isaladi lesilimo esidliwayo esinama-apula
Yiziphi izitayela zokugqoka
Isibeletho esingaphansi nesicansi se-back back: izimbangela, izimpawu, izimpawu ezibalulekile emtholampilo kubesilisa nabesifazane
Yini okufanele ngiyenze ngemva kokuhlanza ubuso bami?
Izindwangu ezimfushane mayelana nentwasahlobo nezimpendulo - ezinganeni zasenkulisa 3-4 iminyaka kanye nabafundi esikoleni 1, 2, 3 amakilasi - Izibonelo zezembatho ezilula ezilula neziyinkimbinkimbi entwasahlobo yabantwana
Indlela yokuba umbhangqwana ofanelekayo